Berbera 2017: 'Bishu waa toban’ warbixin
Magaalada Berbera muddo shan sannadooda waxa ka hir-galay horumar muuqda, waxaanay heshay rejo hor leh….”Akhri Warbixin: Wariye Saleeban Cabdi Cali (Kalshaale)
Berbera(GNA)-Muddo haatan laga joogo afar sannadood oo ku beegnayd 2013-kii, waxa indhaha bulshada reer Berbera soo jiitay makhaayad nooca shaaha iyo cuntooyinka fudud lagu iibiyo oo laga furay dhisme fooq ah oo ku yaalla Xaafada Shacabka, taasoo laga cabi jiray cabitaanka Qabow, Bunka iyo waliba Shaaha lagu kariyo Mishiinka korantada ku shaqeeya, waxaana halkaas ka furay Muwaadin u dhashay somaliland oo wakhti dheer dalka ka maqnaa.
Dhismaha cusub ee ka socda Berbera/GNA
Dabayaaqadii sanadkii 2010-kii booqasho-howleed uu ku yimi wasiirkii wasaaradda Kalluumaysiga iyo Maamulka Dekedaha ee xilligaas Dr. Maxamed Yaasiin Xasan, waxay dad badan dareensiisay dayac iyo dib-u-dhac barriinsaday Magaaladan, laf-dhabarta u ahayd dhaqaalaha dalka.
Dayaca ka muuqday magaaladani, wuxuu ahaa mid iminka uun raadadkiisu ka sii suulayo, waxaana ugu darnaa meelaha uu aadka looga dareemeyey, adeegyada aasaasigaa ee danta guud, dhaqdhaqaaqa Ganacsiga iyo bilicda magaalada oo aad u liitay, niyad xummona ugu filnaa qof kasta oo xogogaal u ah kaalinta ay kaga jirto berbera magaalooyinka waaweyn ee waddanka iyo khayraadka dabeecigaa ee ay dheertahay caasimadaha kale ee gobolada.
Dhismeyaasha Magaaladu waxay ahaayeen ama u badnaayeen guryihii hore oo burbursan.
Goobaha adeega bulshada ee dowladda, jidadka iyo xarumaha wax-soo-saarku dhamaantood waxay ka marag-furayeen baylahda hadhaysay magaaladan qadiimigaa.
Haddase, marxaladaas way ka soo gudubtay Berbera, waxaanay muddo sanaddo ah gudahood cagta saartay jid lagu tilmaami karo horumar balaadhan, kaasoo hal-beegiisu yahay Dayax tobanaad oo si wanaagsan Iftiinkiisu muuqday gelinka hore ee Caweyska.
Waxa Dib u dhis, qurxin iyo horumarin lagu sameeyey dhamaan kaabeyaasha aasaasigaa, sida; adeegyada bulshada, ganacsiga iyo wax soo-saarka dabeecigaa ee Magaalada, waxaana bilaabmay xilli kobaca dhismaha magaaladdu uu noqdo mid xawli ku socda.
Waxa dhismay xaafado cusub, qorsheynta iyo caalamadaha dhulka ka baxsan magaaladuna wuxuu marayaa meel aad uga fog-fog halkii ay hore ugu joogtay Magaaleyntu. sidoo kale waxa dhismeyaal kala duwan oo ay qaarkood casri yihiin laga dhisay dhinaca Xeeliga badda iyo dacallada kale ee ay magaaladu u fiday.
Ganjeelada cusub ee iminka laga yagleelay dhulka banaan ee darafyada Magaaladu waxay cajab gelinayaan qofka aan joogin sannadihii u dambeeyey.
Waxa kale oo badhtamaha magaalada laga qotomiyey Guryo dhaadheer oo Fooqyo ah,kuwaas oo kor u qaaday bilicda iyo Ganacsiga, waxaana dhismeyaashaas leh Shirkaddo Ganacsi iyo ashkhaas maal-gaashi ku sameeyey magaalada.
Dhanka kale waxa si hagar la’aan ah loo hagaajiyey waddooyinka mara faras magaalaha iyo kuwa xaafadaha magaalada isku-xidha oo intooda badan Laami la saaray, loona sameeyey calaamado tilmaameyaal ah iyo kuwo bilic ka qayb-qaadanaya.
Dhinaca wax-soo-saarka dabeecigaa waxa ay bulshada reer Berbera, toos ula qabatimeen ka faa’idaysiga khayraadka Badda. Cuntada ugu badan ee lagu cunno Magaaladdu waa Kalluunka oo aan sannado ka hor sida iminka si lamida aan looga heli jirin suuqyo u gaar ah iyo Hudheelada laga cunteeyo toona.
Laba Dhalinyar reer Berbera ah oo wandaafinaya Xabad Kalluun ah/GNA
Dhalinyaro badan oo da’yar ah ayaa fursado shaqo ka helay Iibinta Kalluun qardaasyo yar-yar lagu xidho oo lagu iibiyo xarumaha Gaadiidku ka baxaan ee Magaalada. Qaar badan oo kamida hudheelada laga cunteeyo ayaa kaalintii Hillibka Xoolaha ku bedelay Kalluun.
Geesta kale horumarka ka muuqda Magaalada Berbera, waxa rejo weyn sii geliyey bilahan dambe Maal-gashiga Caalamiga ah ee Dekedda Berbera iyo Heshiisyada kale ee ay Dowladdu ku wareejisay goobaha istaraatiijigaa, sida Madaarka Diyaaradaha.
Mashaariicdani waxa ay Bulshada reer Berbera ku abuureen yihdidiilo cusub iyo riyo hor leh oo ay ugu diyaar-garoobayaan sidii ay Mustaqbalka dhow u marti-gelin lahaayeen dad badan oo fursad raadis ah iyo kuwo dan-jireyaal ganacsi oo yimaada Magaaladan Taariikhiga ah.
Laakiinse iyadoo horumarkaasi oo dhami jiro waxa wali meesha ka maqan goobihii dhanka dalxiiska iyo Dabaasha badda loogu-talo galay oo ahayd in shaqo-abuur laga sameeyo, isla markaana lagu jiheeyo Dhalinyarada aan fursadaha waxbarasho helin, kuwaasoo inta lagu carbiyo xirfadaha dabaasha iyo kaxaynta Huudhiyada Badda lagu tamashleeyo, kaddibna loo sameeyo xarumo badda laga galo oo ay dadka Dalxiiseyaashaa ee doonaya inay badda ku dabaashaan ku siinayaan adeegyada u fududeynaya gelista badda, iyagoo qaadaya lacag xadidan oo Mushqaayad Shaqaala iyo daryeelka qalabka badda lagu galo loo qoondeynayo.
Waxaana arrintaasi ka qayb-qaadanaysaa sugida nabad-gelyada badda iyo soo-jiidashada dalxiiseyaal badan oo Ajaanib iyo muwaadiniinba isugu jira.
berbera DAYACA DEKEDDA DHISMAHA HORUMAR KALLUUNKA Somaliland SUUQA	2017-05-05
Previous: A Desperate Plea for Help as 4 African Nations near A Famine Crisis
Next: Shaqaale iyo Askar la shaqeynayey Komishanka Doorashooyonka oo lagu xidhay Berbera